Vaovao - Rehefa avy nijanona elaela tao amin'ny indostrian'ny silikônina dia maro ny mpanjifa no handre ity fanontaniana ity: ny vokatra silika mitovy habe na mitovy firafitra aminy dia samy manana ny vidiny.
Belt Conveyor maivana
Lamba vita amin'ny fingotra
Cushion vita amin'ny landy
Rehefa avy nijanona ela tao amin'ny indostrian'ny silikônina dia maro ny mpanjifa no handre ity fanontaniana ity: ny vokatra vita amin'ny silika mitovy habe na mitovy firafitra aminy dia samy manana ny vidiny.
Rehefa avy nijanona ela tao amin'ny indostrian'ny silikônina dia maro ny mpanjifa no handre ity fanontaniana ity: ny vokatra vita amin'ny silika mitovy habe na mitovy firafitra aminy dia samy manana ny vidiny. Amin'ity lohahevitra ity dia efa nisy
Sahirana kely aho. Mba hamahana ity olana ity, ankoatry ny fianarana avy amin'ireo teo alohan'ity orinasa ity dia nividy vokatra silika tamin'ny vidiny, mpanamboatra ary faritra maro aho mba hampitahana.
Androany, homeko fanazavana tsotra momba ny orinasanay’s vokatra, manantena ny hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny indostrian'ny vokatra silikola.
1. Mikasika ny fitaovana: ny indostria manokana sasany dia misy fepetra takiana amin'ny vokatra silicone. Ohatra, ny vidin'ny vokatra silikona vita amin'ny lakaon'ny toetr'andro sy ny vokatra silika mahazatra dia tsy mitovy mihitsy.
2. Haben'ny firafitra: Ny gel silica sasany dia toa mitovy amin'ny ivelany, fa ny haben'ny firafiny anatiny dia mety tsy hitovy, ary ny firafiny koa dia sarotra kokoa, izay hisy fiantraikany amin'ny vokatra famokarana, ka ny vidiny dia tsy mitovy
3. Fomba: ny fahasamihafana amin'ny fizotry ny vokatra silônika dia hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny famokarana. Toy ny fanaovana pirinty amin'ny landy, fanontana horonan-taratasy, famindrana hafanana, sns mandritra ny famokarana
4. bobongolo: ny isan'ny loaka amin'ny lasitra vokatra dia hisy fiantraikany amin'ny fahaizan'ny famokarana. Rehefa ny mpanjifa fangatahana sy ny isan'ny lavaka ao amin'ny bobongolo mahatratra tahan'ny antonony, dia azo ahena ny vidin'ny asa ary azo hatsaraina ny fahombiazan'ny vokatra vita amin'ny silika namboarina.
5. fangatahana: ho an'io vokatra io ihany, arakaraka ny maha betsaka ny namboarina, no vao mainka tsara ny vidiny.
Avy etsy ambony, dia azo jerena fa ny vidin'ny vokatra silicone izay mitovy endrika dia tsy hitovy. Izy io dia mifandraika amin'ny akora ampiasaina, ny haben'ny firafitra, ny teknolojia amin'ny vokatra, ny lohan'ny lavaka famolavolana ary ny filaharany.
Noho izany, nanolo-kevitra ny mpanjifa hamaritra ireo atiny ireo alohan'ny hanamboarana ny vokatra ary avy eo hiara-hiasa amin'ny mpanamboatra. Zhongsheng Silicone dia mandray ny mpanjifa rehetra ho tonga hanamboatra, raha mbola mila izany ianao dia eo foana izahay.
Fotoana fandefasana: Mar-25-2021